बुटवलमा आन्तरिक बाइपास सडकको विस्तार सुरु :: Setopati
बुटवलमा आन्तरिक बाइपास सडकको विस्तार सुरु
भगवती पाण्डे बुटवल, कात्तिक २४
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक वाइपास सडकको अतिक्रमण हटाउन सक्रियता देखाएको छ।
आन्तरिक बाइपास सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई उपमहानगरले तीब्र पारेको छ। सोही क्रममा कालिका पथ विस्तारको काम सुरु भएको छ।
अहिले छ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट यो सडक विस्तारका लागि काम थालिएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड र चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
नाली निर्माण गर्ने, फूटपाथ बनाउने काम तीव्र भइरहेको छ। पहिलो चरणमा नाली र फूटपाथ निर्माण सक्ने र लगत्तै पिचको काम सुरु हुने उपमहानगरले जनाएको छ।
यो सडकलाई नमुना सडक बनाउनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको छ। डिपिआरअनुसार झण्डै एक अर्ब लागत लाग्ने छ भने तीन वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमान छ।
गत आर्थिक वर्षको सुरुमै सडकको क्षेत्राधिकार छुट्टाएर काम सुरु गर्ने भनिएपनि केही समय रोकिएको थियो। तर, अहिले भने विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ।
कृषि उपज केन्द्र परिसरदेखि योगिकुटीसम्मको भित्री सडकलाई ८२ फुटको कायम गर्दै नमुना मार्ग बनाउने उपमहानगरपालिकाको दावी छ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम भएसँगै बुटवलमा जनघनत्व र सवारी साधनको चाप बढ्दो छ। ट्राफिक जामको समस्याले भित्री सडकका उपभोक्ता र व्यवसायीहरु मारमा पर्ने गरेका छन्।
विसं. ०५४ सालमा कालिका पथलाई ८२ फुटको कायम गर्नेगरी मापदण्ड बनाइएको थियो। केहीले सडक विस्तारका काममा अवरोध सिर्जना गरेपछि योजनामा परेको सडक विस्तार ढिलोगरी मात्रै सुरु भएको हो।
सडक निर्माणको काम भइरहँदा पनि रोक्न भन्दै केही व्यक्ति अदालतसम्मै पुगेका छन्। उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले नगरवासीहरुकै सहकार्यमा योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन गरिने बताउँदै दीर्घकालीन योजना अनुरुप पूर्वाधार विकासका कामहरु भइरहेको बताए।
बुटवलको वडा नं. ११ देखि १९ का विभिन्न टोलहरु जोड्ने ग्रामिण सडकलाई उपमहानगरले स्तरोन्नति गर्दै ग्राभेल गरेको छ। तिमध्ये केही सडकमा पिचको काम सुरु भएको छ। वडा नं. १ देखि १० सम्मका भित्री सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नेदेखि मर्मत सम्भार गर्ने काम चलिरहेको छ। यी मध्येका वाइपास सडकहरुमा क्षेत्राधिकार छुट्याए लगत्तै कालोपत्रे गर्नेगरी विस्तारको काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ
बुटवलको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको वडा नं. ११ मा अधिकांश सडकहरुको स्तरोन्नति भएको छ। यहाँ गत आर्थिकवर्षमा सञ्चालित करिब एक सय वटा योजनामा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका योजना धेरै छन्। नुमना पिच, नमुना नाली निर्माण, ठूला बस्ती जोड्ने पुल निर्माण देखि ढल निकासका कामहरु भएको वडा अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सुमन श्रेष्ठका अनुसार वाइपास सडकहरुलाई बुटवलको चक्रपथसँग जोड्नेगरी काम भइरहेको छ। बुटवलले चुरे पहाड र तराईलाई जोड्दै झण्डै ४५ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिरहेको छ।
बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन नसक्दा उक्त आयोजना भने अलपत्र छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, कात्तिक २४, २०७६